Ireo Mpitoraka Bitsika Politika Malaza Indrindra Any Afrika? Ndeha Hahitsy Ny Lisitry Ny The Guardian · Global Voices teny Malagasy
Ireo Mpitoraka Bitsika Politika Malaza Indrindra Any Afrika? Ndeha Hahitsy Ny Lisitry Ny The Guardian	Voadika ny 04 Novambra 2012 4:22 GMT
Zarao: Ny 30 Oktobra 2012, namoaka ny ‘Africa's top tweeters: political pioneers in the digital debate’ (Ireo Mpitoraka Bitsika malaza indrindra ao Afrika : ireo mpisava làlana politika ao anatin'ny adihevitra dizitaly) ny The Guardian. Haingana loatra tamin'ny fanaovana tsoakevitra ve i David Smith ao amin'ny The Guardian?
Eny, izany no hevitr'ireo Afrikana Sub-Sahariana mpitoraka bilaogy ao amin'ny Global Voices.
Firenena maro no tsy hita ao ary tsy misy mpanao politika “Francophone” na “Lusophone” na iray aza ao anatin'ilay lisitra. Ary aiza ireo vehivavy? Mitombo ny vehivavy mpanao politika ao Afrika. Amin'izao fotoana, manana filoham-pirenena vehivavy i Malaoi sy Liberia raha lasa Mpikambana Tanora indrindra ao amin'ny Parlemantan'i Afrika ny vehivavy Ogandey tanora iray.
Tena hita ao anatin'io lisitry ny The Guardian io ve ireo olona sy firenena tena fanta-daza?
Mpanao politika toa an'iza no tena tokony ho ao anatin'io lisitra io? Misy ihany koa ny olan'ny mpanaraka vs firotsahana. Misy vitsivitsy amin'ireo mpikambana anatin'ny vondrom-piarahamonintsika no nanamarika fa mety hisy fahasamihafana goavana eo amin'ny isan'ireo mpanaraka sy ny adihevitra/firotsahana satria mikasika tanteraka an'ireo ‘mpisava làlana politika ao anatin'ny adihevitra dizitaly’ io lisitra io. Nilaza ny mpikambana iray:
Ireo mpanao politika tahaka an'i Martha Karua any Kenya dia mirotsaka kokoa ao anatin'ny Twitter na tsy dia manana mpanaraka firy aza izy ireo raha oharina amin'ireo mpanao politika hafa malaza.
Ny filoham-pirenena ao Roandà Paul Kagame mitsidika ankizy any amin'ny Kianja filalaovana Tennis Ibirunga ao amin'ny tanànan'i Musanze, taorian'ny nanekeny ny fanasanà tao amin'ny Twitter avy aminà Kenyana mpitoraka bilaogy ny Martsa 2011. Sary an'ny SavyKenya
Nanapa-kevitra ny haka vaovao avy any ifotony mikasika ny lisitra iray hafa feno kokoa izahay ary afaka mandray anjara eto ihany koa ianao.
Rehefa manampy mpanao politika iray ao anatin'ny rakitra ianao, iangaviana hanampy ireto fampahalalana manaraka ireto:
Ny anarana ampiasainy ao amin'ny Twitter
Ny Isan'ny arahany
Ny isan'ny mpanaraka azy
Ny isan'ireo Bitsiny
Famaritana fohifohy mikasika ny fampiasàn'ilay mpanao politika ny Twitter – inona no mampiavaka azy?
Iangaviana ianao hifandray tanana aminay amin'ny alalan'ny fanampiana io lisitra io na amin'ny alalan'ny fanolorana sosokevitra mikasika ny fomba fiasa tsara indrindra hifantenana izay tokony ho raisina ho mpisava làlana ara-politika anatin'ny adihevitra dizitaly ao Afrika.
*Ireo mpanao politika mavitrika no ifantohanay (fa tsy ireo mpitoraka bitsika politika na mpitari-bahoaka).
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraPernille Baerendtsen
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Português, Deutsch, Italiano, English
Media sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaPolitikaTeknolojia